Sanhok မြေပုံနှင့် PUBG Mobile အသစ်မွမ်းမံခြင်းအသစ်နှင့်အခြားအရာများ | Androidsis
နောက်ထပ်အသစ်နှင့်အဟောင်းများ Sanhok မြေပုံအသစ်ရှေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုထည့်သွင်းထားသော PUBG Mobile update။ အမေရိကန်စစ်တပ်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲစစ်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့သည့်ဗီယက်နမ်ကိုသတိပေးသည့်တောတွင်းမြေပုံတစ်ခု။ ထို့ကြောင့် Miramar နှင့် Erangel တို့နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောမြေပုံအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းကိုပြုလုပ်ပါ။ ထို့ကြောင့်ချုံခိုတိုက်ခိုက်မှုများနှင့်မဟာဗျူဟာမြောက်ရာထူးများသည်လုပ်စရာများစွာရှိသည်။
ဒါပေမယ့်ဆိတ်ကွယ်ရာရှိခြင်းမှ သေးငယ်အတိုင်းအတာတစ်ခုလုံးမြေပုံ ဤစကားလုံးနှစ်လုံးအပြင်ငါတို့အထူးboxရိယာအတွင်း၌အထူးသေတ္တာတစ်ခုကျရောက်စေရန်မီးတောက်ဖြင့်အာရုံစူးစိုက်နိုင်ပြီဟူသောအတွေးနှင့်လည်းရင်းနှီးလာသည်။ ထို့အပြင်အလိုအလျောက်ရိုင်ဖယ်သေနတ်အသစ်၊ လက်နက်များအတွက်အပိုအသုံးအဆောင်များနှင့်မော်တော်ယာဉ်အသစ်များအစရှိသည့်များစွာရှိသည် - « Muscle Car »
4 PUBG Mobile တွင်ပိုမိုသောအရာများ
ကျနော်တို့နီးပါးနိုင်ဘူး Guns n Roses သီချင်းသီဆိုပါ Sanhok, တောအုပ်နှင့်ပြည့်ဝ၏မြေပုံတိုက်ရိုက်ဝင်ရန်ချုံခိုတိုက်ခိုက်မှု၏နေ့၏အစဉ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဂိမ်းကိုနားလည်ရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာဗားရှင်း 0.8.0 ဖြင့် PUBG Mobile တွင်ဖြစ်သည်။ 0.7.0 ့တိုတောင်းသည်.
ထိုအဖြစ်အပျက်အတွက် Tencent Games သည် PUBG Mobile ကိုစတင်သောအခါ update ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်သည့်အချိန်တွင်ကိုက်တစ်ခုဖွင့်ရန်နောက်တွဲယာဉ်တစ်စီးထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ နာရီပေါင်းများစွာကြာလိမ့်မည်၊ မနက်ဖြန်နောက်ဆုံး၌သင်လုပ်နိုင်သည် တူညီတဲ့ဂိမ်းကို client ကနေ update ကို Tencent မှ
ဗွီဒီယိုနောက်တွဲမှာမင်းမြင်နိုင်တဲ့အတိုင်း Sanhok မှာနေရာလည်းရှိတယ် သူတို့အားပိုမိုပွင့်လင်းသောနေရာများနှင့်အတူစနိုက်ပါများအတွက် ကျနော်တို့ကမ်းခြေသို့ရောက်သောအခါ၎င်းသည်ကုန်းတွင်းပိုင်းဒေသ၌ဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းလှုပ်ရှားမှုသည်စိတ်ရှုပ်ထွေးလာပြီးအထူးသဖြင့်ထိုချုံချောင်းများကိုပြင်ဆင်ရန်ဖြစ်သည်။
PUBG Mobile version 0.8.0 ၏အကြီးမားဆုံးအင်္ဂါရပ်များထဲမှတစ်ခုမှာမီးတောက်မီးတောက်၏နိဒါန်းဖြစ်သည်။ ဤသည်အလွန်ကြီးစွာသော function ကိုရပါလိမ့်မယ်နှင့်ဖြစ်ပါတယ် ပြည့်စုံလာလိမ့်မည်ဟုကြီးမားသော box ကို "ခေါ်" နိုင်ပါလိမ့် အကောင်းဆုံးလက်နက်၏။ သို့သော်၎င်းမှာကြီးမားသောမသန်စွမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျန်ကစားသမားများသည်အရူးအမူးစွဲလမ်းကြလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ကစားသမားအားလုံးနှင့်သင်ကိုယ်တိုင်အကာအကွယ်ပေးနိုင်လိမ့်မည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကစားကွင်းအတွင်း၌ရှိလျှင်၊ အပြင်၌ရှိလျှင်မီးသေနတ်သည်သေတ္တာတစ်လုံးကိုဆင့်ခေါ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ကျည်ဆံဒဏ်ခံနိုင်သည့်ယူအက်စ်ဖြစ်လိမ့်မည် အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောနည်းလမ်းဖြင့်ပြန်သွားရန် စစ်ပွဲများနှင့်ကစားခြင်းများစွာကိုပေးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသောသီးသန့်အရာဝတ္ထုအသစ်အတွက်ကွဲပြားသောနည်းဗျူဟာများ။
ငါတို့မှာလည်းရှိတယ် အသစ်အလိုအလျောက်ရိုင်ဖယ်, အ QBZ 5.56mm ခဲယမ်းမီးကျောက်။ ၎င်းတွင်အလိုအလျောက်နှင့်တစ်ခုတည်းသောစနစ်နှစ်ခုရှိသည်။ သီးနှံအတွက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုကိုလည်းအသစ်ပြောင်းခြင်းအသစ်တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ ဤသည်လက်နက်၏ "မှုန်ရေမွှား" ကိုဒေါင်လိုက်လျှော့ချရန်နှင့်အလျားလိုက်တိုးမြှင့်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်။
နောက်ထပ်အကြီးမားဆုံးဖြည့်စွက်ချက်တစ်ခုမှာအခြားမော်တော်ယာဉ်သစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ထိုင်ခုံ ၄ ခုရှိပြီးပြောင်းလဲနိုင်သောဗားရှင်းနှစ်မျိုးလုံးရှိသည် အခြားအဖြစ် "ဖုံးလွှမ်း။ " ဒီတော့ဗားရှင်းအသစ်မှာငါတို့မှာမော်တော်ယာဉ်အသစ်နှစ်စီးရှိတယ် - Muscle နှင့် UAZ သည်မီးတောက်နှင့်အတူပေါ်လာသည်။
PUBG Mobile တွင်ပိုမိုသောအရာများ
ပုံမှန်အားဖြင့် PUBG Mobile မွမ်းမံချက်များတွင်ဖြစ်ပျက်သကဲ့သို့ အသစ်သောအင်္ဂါရပ်များကောင်းတစ်အရေအတွက်ပါဝင်သည် သေးငယ်ပေမယ့်သူတို့ကဂိမ်းစက်ပြင်ပေါ်တွင်ကြီးစွာသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့လေ့ပေမယ့်။ ဤသည်များမှာ:
အောင်မြင်မှုများ - နောက်ထပ်အနည်းငယ်ထပ်ထည့်ပြီးပါပြီ။ သူတို့က "မစ်ရှင်" အောက်မှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
Clan perks: ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်း (၀ ယ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့်) တိကျသောစီးရီးများရရှိပြီးနောက်ကစားသမားအတွက် CU ပမာဏကိုဆုချလိမ့်မည်။ ကျန်အဖွဲ့ဝင်များနှင့်မျှဝေပါ.
Clan အဆင့် - သီတင်းပတ်နှင့်ရာသီ၏အတက်ကြွဆုံးမျိုးနွယ်စုများစာရင်းကိုယခုဖော်ပြသည်။
လိမ်လည်လှည့်ဖျားမှုအစီအမံဖြေ - ပလပ်ဂင်အသိအမှတ်ပြုခြင်းများကိုတိုးမြှင့်ပြီးကြည့်ရှုသူ mode၊ အခြေခံအချက်အလက်နှင့်ရလဒ်များသို့သတင်းပို့ခြင်းခလုတ်များထည့်သွင်းထားသည်။
အ အချိန်ကန့်သတ်အရာဝတ္ထု ယခုသူတို့သည် BP အချက်များ (hooray!) အတွက်တိုက်ရိုက်ဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။
Progress Missions - ပြီးပြည့်စုံသောမစ်ရှင်များမှရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများအားလုံးကိုရရှိရန်စုဆောင်းမှုအားလုံးကိုခလုတ်ကိုထည့်ပြီးဖြစ်သည်။
ထည့်သည် Royale Pass အတွက်မစ်ရှင်အမျိုးအစားများ အဆိုပါတိုးတက်မှုကပိုပျော်စရာစေရန်။
ဂိမ်းတစ်ခုပြီးနောက်နက်နဲသောအရာတခုကို box ကိုလက်ခံရရှိရန်အခွင့်အလမ်း။ ပါ ၀ င်သည့်အရာများကိုကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ထားပါသည်။
ရာသီစာမျက်နှာ ယခုရာသီအားလုံးပြသ ရာသီခေါင်းစဉ်များ၊ အမြင့်ဆုံးရရှိသောအရာများနှင့်အခြားအရာများစသည့်စိတ်ဝင်စားမှုပြဇာတ်များနှင့်အချက်အလက်များ။
မော်တော်ယာဉ်တွင်ထည့်သွင်းထားသော 3D မော်ဒယ်များနှင့်လေယာဉ်အစင်းများကိုစတိုးဆိုင်၏ကြိုတင်မြင်ကွင်းတွင်တွေ့ရမည်။
ရာသီစာမျက်နှာပေါ်ရှိ Animation ကိုပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ထားသည် အချို့သောတိကျတဲ့ device ကိုမော်ဒယ်များသည်။
El chat system ကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ထားပြီးဖြစ်သည်.
ဤအသစ်သောအသစ်သောအရာများထဲမှကျွန်ုပ်တို့သည်အပူကာကွယ်ခြင်းနည်းလမ်းများကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကိုင်စွဲထားပြီးယခုအချိန်သည် BP အချက်များအတွက်အချိန်အရာဝတ္ထုများကိုဖလှယ်နိုင်သည်။ က Sanhok မြေပုံအသစ်ကိုယူဆောင်လာသည့် PUBG Mobile အသစ် update နှင့်ထိုသူအပေါင်းတို့သတင်းများပျော်မွေ့ဟုပြောသည်
[အသစ်ပြုပြင်သည်] PUBG Mobile APK ကိုဗားရှင်း 0.8.0 သို့ယခုသင်ကူးယူနိုင်သည်။ သငျသညျဂိမ်းစတင်သောအခါ, update ကို၏ကျန် download လုပ်ပါလိမ့်မယ် (က 10-30 မိနစ်ကြာနိုင်ပါသည်။ )
APK ကို Download လုပ်ပါ။ PUBG မိုဘိုင်း 0.8.0
ဤလမ်းညွှန်များကိုဖြတ်ကျော်ရန်မမေ့ပါနှင့် အတွက် ဗားရှင်း5၏ 0.7.0 လှည့်ကွက်ကိုငါသိ၏နှင့် ဒီတစ်ခုက PUBG Mobile အတွက်ပိုကောင်းတဲ့ကစားသမားဖြစ်ဖို့, မရှိမဖြစ်!
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » PUBG မိုဘိုင်း » [APK] PUBG Mobile အသစ် update ကို 'Sanhok' မြေပုံအသစ်၊ မီးတောက်သေနတ်နှင့်အခြားအရာများဖြင့်ယခု download လုပ်ပါ